Tilikambo Fiambenana sy Mifohaza! Mihena ny Pejy fa Mitombo ny Fiteny
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Iban Ibo Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kimbundu Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Norvezianina Nzema Ouzbek Persianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tamoul Tarasque Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Umbundu Valencienne Xhosa Yorobà Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Mihena ny Pejy fa Mitombo ny Fiteny
Lasa 16 pejy Ny Tilikambo Fiambenana ho an’ny besinimaro sy ny Mifohaza! fa tsy 32 pejy intsony, manomboka amin’ny Janoary 2013.
Ho vitsy kokoa ny lahatsoratra ao amin’ireo gazety ireo, ka ho afaka handika azy ireny amin’ny fiteny maro kokoa ny mpandika teny. Nadika tamin’ny fiteny 84, ohatra, ny Mifohaza! Desambra 2012 ary tamin’ny fiteny 195 Ny Tilikambo Fiambenana Desambra 2012. Adika amin’ny fiteny 98 anefa izao ny Mifohaza! Janoary 2013 ary amin’ny fiteny 204 Ny Tilikambo Fiambenana Janoary 2013.
Mbola ho 32 pejy ihany anefa Ny Tilikambo Fiambenana fianarana.
Mihena ny atao pirinty fa mitombo ny ato amin’ny Internet
Hisy vokany eo amin’ilay tranonkalanay www.jw.org izany fiovana izany. Ireto avy izany:
Ao amin’io tranonkala io ihany sisa no hahitana ny lahatsoratra sasany nivoaka tao amin’ireo gazety. Ireto, ohatra, ny sasany amin’izany: “Ho An’ny Ankizy sy ny Tanora”, “Andao Hianatra Baiboly!”, tatitra momba ny fizarana diplaoman’i Gileada, izay fahita tao amin’ny Tilikambo Fiambenana ho an’ny besinimaro, ary “Natao Hodinihin’ny Mpianakavy” sy “Manontany ny Tanora”, izay fahita tao amin’ny Mifohaza!
Hiampy koa ny endrika elektronika hisehoan’ny Tilikambo Fiambenana sy Mifohaza! Efa an-taonany maro ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana sy Mifohaza! no napetraka tao amin’ny www.jw.org tamin’ny endrika PDF. Hisy amin’ny endrika HTML koa anefa izao izy ireo, ka ho mora kokoa ny mijery sy mamaky azy amin’ny ordinatera na amin’ny fitaovana entin-tanana. Ho mora aminao koa ny hijery ny bokinay hafa amin’ny fiteny 400 eo ho eo ao amin’ny Internet.